ပေါ်လစီ | စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများ | ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းများ | ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ
ပြန်ကြားရေးမှတဆင့်စုဆောင်း www.itstechschool.com သို့မဟုတ် www.itstraining.in လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားနှင့်စျေးကွက်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့တတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းများလွန်သည်မဟုတ်။
သငျသညျသတင်းအချက်အလက်ရှာကြံလျှောက်ထားသို့မဟုတ်မေးလျှောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်သင်တန်းသတင်းအချက်အလက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမှတဆင့်များနှင့်အရာ အကယ်. သင်သည်ထိုအမှု၌သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ shared လျှင်သင်ကျနော်တို့များကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျွန်တော်တို့ဆီကရံဖန်ရံခါအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော e-mail ကိုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိမထားဘူးဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကျေးဇူးပြုပြီး info@itstechschool.com သငျတို့သညျငါတို့မှမဆိုအနာဂတ်အီးမေးလ်များကိုမခံမယူပါလိမ့်မယ်။
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များမှသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရှုထောင့်များကိုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နှင့်အတူမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြန်သင့်ရဲ့ဧရိယာ၏ကိုယ်စားလှယ်မှကူးယူမည်ဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ပေးရာပူဇော်သက္ကာကိုသူတို့ထံမှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိပေလိမ့်မည်။
ကြောင့်မေးလ်အင်ဂျင်အသုံးပြုမှုကို spam filter များ၏စျေးကွက်နှင့်ပရိုမိုးရှင်းမေးလ်တွေအများကြီးရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုအမြဲတမ်းမရောက်ရှိအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များပိုင်ရှင်မဲ့မသွားသင့်ကြောင်းသေချာစေရန်, ငါတို့ alternate အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးပြီး (ကနောက်ဆက်တွဲအီးမေးလ်ပို့ admin@itsgroup.in in case we do not receivearead report orareply to our email.
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions pixels ကိုနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာများခြေရာခံတွေ, cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာအပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုအားဖြင့်ကျဆင်းသွား cookies တွေကိုသို့မဟုတ်တတိယပါတီများကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါ့အပြင် cookies များကိုလည်းသင်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သင်သည်ရန်ကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ site ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့ကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အားလုံးအကြွေး / ငွေကြိုကတ်များအသေးစိတ်ကိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းထားရောင်း shared, ငှားရမ်းထားသောသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီများမှမှငှားရမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများပြောင်းလဲသွားပါသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရံဖန်ရံခါ updated နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Customer များ '' မကြာခဏဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. မွမ်းမံနိုင်ရန်အတွက်ဤအကဏ္ဍများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံသူတို့ posted ကြသည်သောနေ့၌ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျဆိုက်ပေါ်မှာမြင်ကြော်ငြာများအချို့မှာထိုကဲ့သို့ကြော်ငြာကွန်ယက်များ, ကြော်ငြာအေဂျင်စီ, ကြော်ငြာရှင်များနှင့်ပရိသတ်ကို segment ကိုပံ့ပိုးပေးအဖြစ်, တတိယပါတီများမှရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေကြသည်။ ဤတတိယပါတီများ, cookies များကိုမှတဆင့်ဆိုက်အပေါ်သို့မဟုတ်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖြစ်စေ, သင်နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း web beacons, သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုနားလည်နှငျ့သငျဖို့သင့်အကျိုးစီးပွား လိုက်. ဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအခြားနည်းပညာများလိမ့်မည်။ ဤတတိယပါတီများစုဆောင်းစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်များ, ငါတို့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့, ဒါမှမဟုတ်ကျော်ထိန်းချုပ်ပေးပါ။ ဤတတိယပါတီများ၏သတင်းအချက်အလက်များအလေ့အကျင့်ကဒီ privacy ကိုမူဝါဒဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြသည်မဟုတ်။
ထဲကသို့မဟုတ်ဤ website ကိုနှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မဆိုအငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်ပြောဆိုချက်ကိုအိန္ဒိယ၏ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ရကြလိမ့်မည်
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာငါတို့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေစေလျှင်, သင်တင်သွင်းဖို့တောင်းနေကြသည်အသေးစိတ်လုံခြုံဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေပေးချေမှုပံ့ပိုးပေးသူထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်၏ Method ကို
ကျနော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်အကြွေး / debit card ကို အသုံးပြု. အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ, ပေါင်, EUR, AED & INR ငွေကြေးကို။
ပြန်အမ်းသာငွေပေးချေ၏မူရင်း Mode ကိုမှတဆင့်ပြုမိပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့သင်တန်း၏ကနဦး4နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ချက်ရရှိမည်ဆိုပါကသင်တန်းကြေးပြန်အမ်းနိုင်ပါတယ်။